Xalayaa Haadha Koo Ishee Awwaala Keessa Jirtuuf - Xalayaa Haadhaf
Haadha Koo Ishee Awwaala Jirtuuf
Haa ga’u nagaan koo kan haadhaa fi ilmummaa qilleensa addaan kutee, tulluu qaari’ee, galaana lamatti muree, awwaala diigee, saanduqa ati keessa jirtu cabsee, ekeraa kee dubbisee……
Akkam jirta harmee? Erga gaafa addaan baanee ati akkamii? Ani nagaa dha. Garuu dhufa kee gaaf tokkollee otoo hin yaadne bulee oolee hin beeku.
Sin yaada, sin dheebodhaam, karaan ilaala. Isa ati gaafa ani ijoollummaa gabaa dhaquuf qajeeltu gaafan dhufummoo bakkee dhaabadhuu na eegi ani shankooraa sii fidee dhufa naan jettutu sammuu koorraa iyya. Gaafa ati lubbuun jirtu kun hunduu natti dhagahamee hin beeku. Garuu kunoo har’a naaf mul’ate.
Harmee waan argee hin beeknen argeem. Ati erga narraa adda baatee ganna 10 ta’eem lakkooftee beektaa? Ayii atoo na jibbiten sehaam, hamma kana garaa natti jabaatte. Ofii yoo dhufuu dhabdellee namatti akkatti keessa jirtu maaf naa hin dhaammnee? Haatii fi ilmummaan hammanaa? Ani guyyaa tokkollee hafee hin beeku dhufeen awwaala keerra dhaabadhee waadaa ati na galchitee deemte haaresseen deebi’ee gala. Ati garuu gaaf tokko na hin dubbiftu. Na oodda maalan balleesse hamma kana? Uumaan araara jaalata maaliif garaan kee dhiifamaaf akkas jabaatee?
Qe’een natti dhiiftee deemte maal akka fakkaate otoo ol jettee agartee maal jetta laata? Akkuma kee durii sana adda koo haxooftee garbicha koo naa guddadhu naan jettee maddii koo lamaan keessa na dhungattaa laata? Moo na oodda? Ani hin beeku yommuun taa’ee yaadu waanan hamma kana si dhabee jiraadhu natti hin fakaatu ture. Garuu waan akkas na jabeesse hin beeku. Atis dur akka kana taatu beektaaf ilmoon dhiiraa garaa kuteessa ta’uu qaba kan naan jetteef ta’a. Maaltu beekas guyyaa du’a kee lakkooftee bira geesseetu beekta ta’a. Atoo ni dhiibamte malee takkaa namas, lafas, daangaa namaas itti buutee hin beektu.
Haadha koo, Beektuu koo, Waan hundumaa koo sin dhabeem. Of bira ilaalee kophummaa, duwwummaa, fira dhabiisa, hirkannaa dhabatu natti mul’ata. Garuu maaliif akkas akkan ta’u na gootee? Waan ati naaf hawwitu hundaa argadheeraam. Atoo hin jirtu maal naa godhaa?
Siree gaafa ati jirtu sanaarra rafaa hin jiru. Nyaata gaafa Sanaa nyaachaa hin jiru. Uffata gaafa Sanaa uffachaa hin jiru. Gaafas miilaanan deema amma konkolaataa jijjiireen oofa. Ati garuu keessa hin jirtu boqonnaan dhabe.
Haadha manaa fuudheen jiraadha jedheellee nama naaf taatun dhabe. Ani kan haadha, obboleettii, abbaa fi haadha manaa naaf taatun barbaada. Harmee otoo agartee kan biyya kana guute hundi ‘’Shaggee bakkeeti’’ jecha kee yaadattee? Nan kolfe dhugaa isa ati jettu yaadadhee. Maalan godhamee anoo ‘’Shaggee manaan’’ dhabe. Ati otoo jiraattee na filta ture mitiigaa? Nan beeka ani ijoollee ta’ee gaafa ati durba bareedduu agartee kana otoon si fuusifadhee gaafa guddattu naan jettu. Harmee waan biraa kan ani sitti hin himne tokkommoo jira. Ani yoon ka’ee fuudhe waanan akkuma Abbaa koo otoo dhala koo hin guddifatiin irraa sokkee, haatis akkuma kee dhala koo bakkeetti dhiiftee deemtu natti fakkaata. Mee maal godhu situ iddoo dhugaa jira waan kana mee na gorsi. Maaliif natti hin dubbattuu? Nan dhiphadheem.
Elaamee jireenyi as moo achi wayyaa? Tariimmoo dhiisee dhufuu? Anoo otoon si faana wal argee jiraadhee natti tolaam. Akka gaafa duraa sanatti rifeensa mataa koo naa qaqqabaa isa ati natti odeessitu sana ammas argachuun hawwa moo atoo guddatteetta dhalchi taphachiisi naan jetta laata? Ani hin beeku amala kee bareedaa sana geeddaratteetta natti fakkaata.
Egaa amma dhaamsa cimaan sitti dhaammadha obsaan na dhaga’i. Yoo dandeesse mee al tokko ol jedhii na dhaggeeffadhu. Na nuffiteeyii? Anuu lammata nagaa kee si hin dhorku dhufee sitti iyyee. Garuu waanan har’a sitti himadhu maal akka ta’e beektaa? Nan hin baqatiin maaloo. Dhalli xuurii hin dabarre qabdiim.
Kaanillee yoo hafe afuuraan natti koottu. Abjuun natti mul’adhuu na taphachiisi. Waanan keessa jirun sitti himadha. Gammachuu fi gadda koo na faana hirmaatta. Ani naman hiriyyaa kooti jedhee waan garaa koo itti himadhu hin qabu. Sababasaa beektaa? Yaadattee maaliif akkan nama hin mariyacheefniif? Ati bar gaafa narraaa adda baatu nama hin amaniin ati tokkichaa kooti naan jetteettaam. Maarree eenyutti himadhuree? Takka takka na aarsita maaliif cal jettaa? Ani naman itti himadhu dhabuun koo hammam akka na miidhaa jiru maaliif sitti hin mul’atuu?
Egaa waan fedhes ta’u yeroo muraasa booda haadha manaa nan fuudha jedhee karoorfachaan jira. Ni dhuftaa sin waama. Nama na eebbisee na gaggeessu hin qabu. Bookaa ati dur naqxee kara deemaa obaaftu sana ana tokkicha kee gaafa cidhasaa eenyutu naqaafii? Eenyutu habbuuqatee itti tuttufee eebbisee gaggeessaa? Kana madaan koo agartee? Kanaafan bultii ijaaruu jibbee hamma kana taa’e.
Innoo haa hafu anoo akkumasaattuu nan fuudha. Haati manaa dhuftee eenyutu maqaa moggaasaa? Bultii shanan ishee eenyu qaama haa dhiquu? Daahumsisoo jira eenyu haa wal’aanuu? Ijoolleen dhalatanoo mana eenyuu dhaqanii afuura fudhatuu? Egaa kana hundaaf deebii yeroo dhiyootti naa ergita jedheen amana. Iddoon jirtu sitti haa tolu gaaf tokko ijaan wal agarra. Nagaatti sin jaaladha haadha koo.
Ilma kee, tokkicha kee, waan hunda kee kan awwaalaa ol jiru haadha koo awwaala keessa jirtuuf!!!
Share gochuu hin dagatina!
Uuufffffffffff garaa kootuu naa gubaate imimaantu naadhiqee obsa siif haa keenuu maalii godhu mit
wow my GOD!seenaa bara 2005 onkoloolessa 12 haadha koo du’aan dhaben yaaddadhe.nan gaddes. nan boo’ees garuu homaa gochuun hin danda’amu.Waan hundaafuu galatoomaa warri xalayaa kana barreesitan
baayyee nama marara!!!!!!!uuuuff
maaloo maloo maloo maaliif uffff.
bochiftaa?;garaan na gubate.